Sahaminta bulshada waxay muujineysaa taageerada kordhinta maalgelinta | Faahfaahinta Wararka Degmada
Sahaminta bulshada waxay muujineysaa taageerada kordhinta maalgelinta
Marka loo eego natiijooyinka ka soo baxay sahan bulsho dhowaan, dadka degan degmo dugsiyeedku waxay diyaar u yihiin inay siiyaan lacag dheeraad ah degmada dugsiga. Taasi waa war wanaagsan maadaama degmadu ay eegayso in afti loo qaado codbixinta bisha Nofembar si loogu beddelo canshuuraha shaqeynaya ee dhaca.
Xubnaha guddiga dugsigu waxay heleen natiijooyinka sahamin-muunad dhowaan lagu sameeyay sahamin cilmiyaysan oo ku saabsan deggeneyaasha degmada oo ay qabatay BakerTilly. Eeg bandhigga guddiga dugsiga . Sahanku wuxuu tijaabiyey taageerada xulashooyinka maaliyadeed ee kala duwan ee la xiriira aftida suurtagalka ah ee dhici doonta Noofembar 2021, oo ay ku jiraan:
cusboonaysiinta canshuuraha jira
kordhinta canshuuraha howlgalka ee degmada
lacag dheeraad ah oo loogu talagalay tikniyoolajiyadda waxbarista
maalgelin dheeri ah si wax looga qabto mashaariicda xarumaha mudnaanta sare leh
Sahaminta ayaa sidoo kale tijaabisay falcelinta ku saabsan canshuur kordhinta kala duwan, iyo sidoo kale kordhinta fikradaha bulshada ee ku saabsan degmada guud ahaan tayada, dhaqaalaha, mudnaanta, iyo isgaarsiinta.
Guud ahaan, sahanku wuxuu helay taageerada bilowga ah ee 68% ee cusboonaysiinta canshuuraha hawlgalka, iyo sidoo kale 63.6% taageerada maalgelinta dheeriga ah ee tikniyoolajiyadda waxbaridda iyo 55.6% taageerada mashaariicda xarumaha mudnaanta sare leh.
In kasta oo taageerada bilowga ah ee kororka laga qaadayo canshuurta laga qaadayo ay ahayd 36,9%, taasi waxay u kacday 56.1% markii la wadaagay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida lacagaha cusub loo maalgashan karo. Bixinta taageero tacliimeed ee ardayda halgameysa, ballaarinta barnaamijka wadiiqooyinka shaqada ee dugsiga sare, iyo casriyeynta aaladaha xisaabinta ee shaqaalaha iyo ardayda ayaa ahaa waxyaabihii jawaab-bixiyeyaashu ay inta badan jeclaayeen inay ku taageeraan lacag cusub.
Guddiga dugsiga ayaa qaban doona kalfadhi kale oo shaqo toddobaadyada soo socda si ay si qoto dheer u sii wadaan natiijooyinka sahanka una tixgeliyaan waxa codsiyada ah in lagu daro aftida aftida.
Waxbadan ka baro Aftida 2021 .